डीभी चिठ्ठाको नतिजा आज प्रकाशन हुँदै, आफ्नो नतिजा यसरी हेर्नुहोस् !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/डीभी चिठ्ठाको नतिजा आज प्रकाशन हुँदै, आफ्नो नतिजा यसरी हेर्नुहोस् !!
डीभी चिठ्ठाको नतिजा आज प्रकाशन हुँदै, आफ्नो नतिजा यसरी हेर्नुहोस् !!
काठमाडौं । डीभी चिट्ठाको नतिजा आज शनिबार प्रकाशन हुने भएको छ। अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त हुने डीभी चिठ्ठाको नतिजा नेपाली समयअनुसार शनिबार राति ०९:४५ बजे प्रकाशन हुने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
त्यसका लागि कन्फर्मेसन नम्बर प्रयोग गरी https://www.dvlottery.state.gov/ मा नतिजा हेर्न सकिने दूतावासले जानकारी दिएको छ।
कोरोनाभाइरस : इटालीमा तीन दिनदेखि दैनिक ३ सय भन्दा बढीको मृत्यु